Wafdi ka socday Dowlada Federaalka oo Maanta kismaayo lagu xanibay – SBC
Wafdi ka socday Dowlada Federaalka oo Maanta kismaayo lagu xanibay
Wafdi heer wasiir ah oo ka yimid magaalada Muqdisho xarunta dalka islamarkaana ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ayaa dib looga celiyay garoonka maanta oo Axad ah .
Ciidamada Kenya iyo kuwa Maamulka Jubaland ayaa wafdigaasi ku amray in aysan u gudbikarin qeybaha kale ee magaalada waxayna u sheegeen in maamulka Jubaland oo amar ku bixiyay in ay halkooda joogaan.
Afhayeenka maamulka Kismaayo C/naasir Seeraar ayaa isaguna sheegay in wafdigaasi arimaha loogu hakiyay garoonka diyaaradaha Kismaayo ay ka qeyb yihiin xaaladaha sidaasadeed ee isdiidan ee ka dhexjira Dowlada Federaalka iyo Maamulka Kismaayo.
Ciidamada Kenya oo Saraakiishooda qaarkood ay la hadleen saxaafada ayaa iyaguna sheegay in maamulka Kismaayo uu soo gaarisiiyay in hadii wafdigaasi ay soo dhaafaan garoonka diyaaradaha aanay jirin cid amaankooda damaanad qaada.
Wafdiga laga xanibay inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa ka kooban wasiro iyo xubno kale oo dowlada Federaalka Soomaaliya ka tirsan waxaa ka mid ah wafdigaas wasiirada Amniga iyo Warfaafinta Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Sikastaaba ha noqotee maalmihii ugu dambeeyay waxaa isbedel dhanka afka ah oo xooglihi ka soo baxayay Maamulka Jubaland ee uu Madaxweynaha ka yahay AXmed Madoobe iyadoo hadalo shalay ay saxaafada siiyeen Afhayeenka iyo Madaxweynaha Maamul goboleedka Jubaland waxay siweyn ugu cambaareeyeen Dowlada federaalka Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay ina y wadaan abaabulo dagaal iyo isku dhufasho shacabka Maamul goboleedka Jubaland ah.